Fibreglass Geogrid - China Xi'an Homey Technology
Enye geotextile ne ndizayo ezimbini
geotextiles ezimbini nge ndizayo enye
ifayibha Long nonwoven Geotextile
ifayibha Mfutshane nonwoven geotextile
tube soft akubonakali
inkqubo yokucoca amanzi inwebu
inkqubo yokucoca amanzi amtyuba RO
Umthamo ukusuka 250LPH ukuya 50TPH
inkqubo yokucoca amanzi oLwandle
inkqubo yokucoca amanzi Standard RO
Ro Ukuhlanjululwa Water Treatment Equipment
inkqubo yokucoca amanzi Standard RO (HMJRO-500LPH)
inkqubo yokucoca amanzi olwandle (HMJSWRO-1000LPH)
inkqubo yokucoca amanzi Standard RO (HMJRO-5000LPH)
inkqubo yokucoca amanzi Standard RO (HMJRO-2000LPH)
Enye geotextile ne ndizayo enye
Inkcazelo fiberglass njengoko umbandela, yamkela inkqubo ukwaluka ethile ezenziwe ngezinto isakhiwo Network, ukukhusela fiberglass nokuphucula intsebenzo ngokubanzi, ngokusebenzisa inkqubo ukutyabeka okhethekileyo ukwenza izinto geotextile edityanisiweyo. Le geogrid fiberglass uhlobo entsha geotextile eziluncedo kakhulu ukuphucula egangathiweyo kunye roadbed. Le nto yenziwa elukiweyo filament fiberglass ephothiweyo wawutyabeka. It has uqine phezulu, zobude phantsi, phezulu modulus ilastiki r esihle ...
Supply Amandla: 50 Piece / Pieces Inyanga nganye
Le fiberglass njengoko umbandela, yamkela inkqubo ukwaluka ethile ezenziwe ngezinto isakhiwo Network, ukukhusela fiberglass nokuphucula intsebenzo ngokubanzi, ngokusebenzisa inkqubo ukutyabeka okhethekileyo ukwenza izinto geotextile edityanisiweyo.
Le geogrid fiberglass uhlobo entsha geotextile eziluncedo kakhulu ukuphucula egangathiweyo kunye roadbed. Le nto yenziwa elukiweyo filament fiberglass ephothiweyo wawutyabeka. It has amandla aphezulu saluqilima, zobude phantsi, phezulu modulus ilastiki nokumelana elihle ukuya phezulu nezisezantsi yokusebenza lobushushu njl, emva kokuba unyango ukutyabeka umphezulu, kunye nokumelana emihle kwealkali nokumelana nokuguga, esisetyenziswa ngokubanzi kwi asphalt yabahambi, isamente yabahambi eziphathekayo kunye nokwandiswa roadbed; zombini indlela nzima imigwaqo bhetyebhetye linokusetyenziswa, xa kuthelekiswa ne kwindlela zemveli ukunciphisa iindleko, wandise ubomi, ukunqanda iintanda reflection endleleni. Fibreglass Geogridnayo kusetyenziselwa kaloliwe, moya, ezigcina amanzi, edamini kunye nezinye nophuculo lomhlaba ethambileyo kunye nokwandiswa roadbed.
1) uqine High amandla, zobude eliphantsi
2) Akukho enyakanyakeni ixesha elide
3) uzinzo Thermal
4) Ukuhambelana kunye nomxube asphalt
5) uzinzo Physical nemichiza
6) Amanqaku ewonke ufako Somqathango
It ngokubanzi ungasetyenziswa ekugcinweni egangathiweyo lwesamente endala, moya-moya, idama, ukhuseleko kwithambeka, indlela kunye ibhulorho yabahambi unyanzeliso processing kunye nezinye iindawo zobunjineli.
Ukucaciswa kunye parameters
Previous: textured geomembrane
Okulandelayo: geogrid ipholiyesta
Abangelwe Fiber Ukomeleza Geogrid
Itha Camera Fibreglass Geogrid
Itha Camera Fibreglass Geogrids
Fibre Glass Isakhiwo Geogrid
Fibreglass engenela Geogrid
Fibreglass nylon Geogrid
Fibreglass Triaxial Geogrid
Glass Fiber leTela Geogrid
iHDPE Fibreglass ipholiyesta Geogrid
Quality High Sale Fibreglass Geogrid
Kk Fibreglass ipholiyesta Geogrid
uqine Fibreglass Geogrid
Warp ababezenzile Fibreglass Geogrid
A-1402, Lvdi ABU 6, Zhangba 1st Road, High-Tech Zone, Xi'an, Shaanxi, China
Iselula & Whats app: + 86-15877553984
Umnxeba & Ifeksi: + 86-029-6569-2269